Wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato sheekooyinka Instagram | Martech Zone
Arbacada, December 13, 2017 Wednesday, September 2, 2020 Douglas Karr
Instagram ayaa leh 250 milyan oo isticmaale maalinle ah oo waxay leedahay awood aan caadi ahayn oo ganacsigaaga ah, gaar ahaan markay shirkaddaadu qaadato Instagram Sheekooyinka muuqaalka. Ma ogeyd 20% ganacsiyada aad u hesho farriimo toos ah iyadoo ay sabab u tahay Sheekooyinka? dhab ahaan, 33% dhammaan sheekooyinka caanka ah waxaa soo galiyay ganacsiyada!
Waa maxay Sheeko Instagram ah?
Sheekooyinka Instagram waxay u oggolaanayaan ganacsiyada inay wadaagaan muuqaal story maalintooda, oo ka kooban sawirro iyo fiidiyowyo badan.
Xaqiiqooyinka ku saabsan Sheekooyinka Instagram
Muddo intee le'eg ayay tahay Sheekooyinka Instagram? 15 ilbiriqsi midkiiba.
Muddo intee le'eg ayay ka hor sheekooyinka Instagram-ka baaba'aysaa? Waa la arki karaa oo kaliya 24 saacadood.
Sheekooyinka Instagram ma yihiin kuwa dadweynaha? Waxay raacaan rukhsadaha aad u dejisay astaantaada guud.
Fiidiyow noocee ah ayaa loo soo dhejin karaa Sheekooyinka Instagram? Qaab MP4 ah oo leh H.264 Codec & AAC audio, 3,500 kbps bitrate video, 30fps ah heerka jir ama ka hooseeya, 1080px ballaaran, iyo xadka ugu badan ee faylasha ee 15mb.
Waxaad isticmaali kartaa isku darka sawirada, fiidiyowyada, iyo boomerangs sheekadaada Instagram.
Furayaasha Guusha Sheekada Instagram
Faahfaahintan faahfaahsan ee ka socota Wadada Wadada kugu dhex socodsiin maayo sheeko oo keliya, laakiin ka baxsan dhisidda istiraatiijiyad Instagram ah Waa kuwan talooyin ku saabsan guusha:
Qorshee wadajirka istaraatijiyad inaad hesho dhammaan hantida aad u baahan tahay si aad u abuurto sheekada aad rabto.
Dooro a waqtiga halkaas oo kuwa raacsan ay ku hawlan yihiin.
Samee saamaynta 4-ta ilbiriqsi ee ugu horreysa si daawadahaagu u joogo sheekada inteeda kale.
Ku toog sheekadaada toosan - sida dhagaystayaashaadu u daawan doonaan.
Isticmaal gotagging si loo kasbado 79% kaqeybgal dheeraad ah bartilmaameedka gobolka.
Abuur fudud arrow daawadayaasha si ay u maraan kor ugu qaadista si ay ula socdaan websaydhkaaga.
Ay kujirto diirada hashtags marka sheekooyinkaaga waxaa lagu soo daray faraantiyada Sheekada.
Isticmaal app sida Jaridda si aad sheekadaada ugu soo gaarto taxane.
Ku dhammee sheekadaada mid adag wicitaan-ku-dhaqaaq si loo dhiiri geliyo hawlgelinta.
Ka fikir sidii aad ku heli lahayd dibedda saameyn inaad la wareegto sheekadaada, tani waxay xoojinaysaa kaqeybqaadashada ku dhowaad 20%!
Adeegso dabeecadaha aan rasmiga ahayn ee Sheekooyinka si aad uhesho xiriir isla markaana aad siiso a ka dambeeya muuqaalka fiiri meheraddaada.
Sii daawadayaasha Sheekooyinka dalabyo gaar ah si aad ula socon karto ugana abaalmarin karto daacadnimadooda.
Isticmaal Sheekooyinka si aad u riixdid a doorashada u bixi dhagaystayaashaada adoo adeegsanaya istiikarka codbixinta. Ha ka dhigto mid gaaban oo macaan, waxaad kaliya leedahay 27 xaraf!
Sheekooyinka Instagram-ka ayaa si weyn u koray tan iyo markii la bilaabay Ogosto 2016, oo helitaanka sida ugu badan looga faa'iideysto waxay faa'iido weyn u tahay dadaalladaada suuqgeynta warbaahinta bulshada. Maxaad sugeysaa Ku bilow sheekadaada hadda. Nivine oo ka socda Headway Capital
Waa tan faahfaahinta weyn, Tilmaamaha Ganacsiga Yaryar ee Sheekooyinka Instagram:
Tags: InstagramSheekooyinka instagramFiidiyowyada Suuqgeyntasheekooyin
Conversica: La xiriir, hawlgal, kobciya oo u qalma adoo adeegsanaya Kaaliyaha AI